Galvalume Steel, Bir duuban oo duudduuban, tuubooyin wareegsan oo aan fiicnayn - HUIYUAN
Farsamaynta biraha xirfadeed. Shaqaale khibrad sare leh & qalabaysan
Waxay Bixisaa Badeecado Ballaadhan
Saaraha, qeybiyeyaasha ahama Steel Squa ...
Saaraha, qeybiyeyaasha ahama Steel Roun ...
Moodeel qabow oo duuban 301 309s 410s 9mm 2507 30 ...
HONGKONG HUIYUAN International Trade Co., Limited waa mid ka mid ah soosaaraha birta & aluminiumka ugu weyn iyo dhoofiyaha Shiinaha. Waxay ku taallaa gobolka Shandong ee Shiinaha, una dhow Dekadda Qingdao iyo Dekadda Tianjin, xamuulka deg -degga ah iyo keydinta xamuulka dhulka.
Dukaan hal-joog ah oo ah alaabada birta ah, astaamaha aluminiumka iyo qalabka adag, ayaa buuxiya dhammaan shuruudahaaga.
Indepent Logistic ee Hawada, tareenka iyo badda, waxay bixiyaan adeeg ugu fiican oo leh tayo wanaagsan.
Wararkii Ugu Dambeeyay Blog
Mid ka mid ah soosaaraha ugu weyn birta & aluminiumka iyo dhoofiyaha Shiinaha. Waxay ku taallaa gobolka Shandong ee Shiinaha, una dhow Dekadda Qingdao iyo Dekadda Tianjin, xamuulka deg -degga ah iyo keydinta xamuulka dhulka.
Tobanka maalmood ee ugu horreeya Ogosto, furaha ...
Sida laga soo xigtay xogta ka timid Ururka Birta iyo Birta Shiinaha, horraantii Ogosto 2021, shirkadaha tirakoobka muhiimka ah iyo shirkadaha birta ayaa soo saaray wadar dhan 20,439,400 tan oo bir ah cayriin, 18.326 milyan oo tan oo birta doofaarka ah, iyo 19.1582 milyan oo tan oo bir ah. Iyaga dhexdooda, soosaarka birta maalinlaha ah wuxuu ahaa 2.0439 ...
Henan waxay qorsheyneysaa 8855 dib-u-dhiska masiibada kadib ...
13-kii Ogosto, Xafiiska Warfaafinta ee Dawladda Henan ayaa qabtay shir-saxaafadeedkii shanaad ee taxanaha ah “Gobolka Henan wuxuu Dardar-gelinayaa Dib-u-Dhiska Musiibada Kadib”. Waxaa laga soo sheegay kulanka in laga bilaabo 12 -kii Ogosto, 7,283 mashaariic waxyeelloobay oo ka dhacay deegaannada ay dhibaatadu saameysey la tiriyey ...
Xaddidaadda wax -soo -saarku ma aha mid dabacsan, waa ...
Marka la eego agabka dhismaha, Waqooyi -bari, Shiinaha Shiinaha iyo Waqooyi -galbeed Shiinaha wax yar baa laga dhimay sababtuna tahay dib -u -habaynta qalabka ee toddobaadkan, gobollada kalena waxay kordhiyeen wax -soo -saarka heerar kala duwan. Woqooyiga Shiinaha iyo Koonfur -galbeed Shiinaha waxay muujiyeen waxqabad aad u sarreeya. Waxaa ka mid ah, Waqooyiga Shiinaha waxaa sabab u ah ...
Ppgi Ppgl, Aluminum-Zinc Steel, Gariiradda Sheet Aluminum, Dhuxul-Galvanized, Dhismaha Profile Aluminium, Gariiradda bireed Aluminum,